Breaking News: Namoonni dhibee Vayirasii Koronaatiin qabaman Ityoophiyaa keessatti argamuu gabaafame - NuuralHudaa
Breaking News: Namoonni dhibee Vayirasii Koronaatiin qabaman Ityoophiyaa keessatti argamuu gabaafame
Gaazexaan Capital jedhamu Itti aantuu Ministeera Fayyaa Ityoophiyaa Dr. Liyaa Taaddase eeruun akka gabaasetti, sakatta’iinsa fayyaa keellaa buufata xiyyaara Boolee keessatti godhameen Vaayirasichi namoota sadi irratti kan argame tahuu ibsame.
Haaluma kanaan namoota dhibee kanaan qabaman yaaluudhaaf Hospitaala Phaawloos keessatti qophiin bal’aan godhamaa jiraatuu odeeyfannoon ni addeessa.
Dhibeen Vaayrasii Koronaa jedhamuun nama irra namatti darbu, hanga ammaa lammiilee Chaayinaa 4500 ol kan qabate yoo tahu, ogeeyyota fayyaa dabalatee namoonni 106 dhibee kanaan du’uu mootummaan biyyattii beeksise.
Vayirasiin jalqaba Chaayinaa keessatti argame kun yeroo ammaa guutuu addunyaa keessatti babal’ataa jira. Haaluma kanaan hanga ammaatti biyyoota namoonni Vaayirasii kanaa qabaman argamuu ibsan jidduu, Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustraaliyaa, Faransaay, Maleezhiyaa, Taaywaan, Jaappaan fi Neeppaal keessatti argamu. Namoonni Vaayirasichi irratti argame hundinuu kanneen dhiheenya Chaayinaa irraa deebi’an tahuu gabaafame.
August 4, 2021 sa;aa 11:51 am Update tahe